Ikhaya / Ikhishi Faucets / Embizeni Filler Ikhishi ompompi / I-WOWOW Pot Pot Filler Faucet Ngaphezu kwe-Stove Chrome
ekhishini isitofu sembiza yokufafaza isitsha sokufakelwa umzimba ngumzimba wesitofu se-304, isisetshenziswa sekhwalithi ephezulu, ukushintshwa kwesibambo esisodwa kulula ukusebenza, isisindo esigcwele senqabe ukusika amakhona, izesekeli eziphelele
2311200C imiyalo yokufaka
I-tap yokugcwalisa imbiza ye-Chrome 2311200C
Uma uqamba ikhishi lakho lomkhiqizo elisha, kuhle ukuthi ungaliklama ngokuphelele kusuka ekuqaleni. Ungacabanga ngakho konke ukusebenza okufisayo nesidingayo ukwenza ikhishi lakho lisebenze kakhulu. Ikhishi lemindeni eminingi yindawo ochitha kuyo isikhathi sakho esiningi lapho usekhaya. Ngakho-ke uyiqamba kangcono ikhishi lephupho elifeza zonke izidingo nezifiso zakho, wena nomndeni wakho. Njengoba udala ikhishi kusuka ekuqaleni, into enhle ukuthi ungakwazi ukwenza noma yini. Akunamkhawulo. Yebo, bhajethi ngokuhlakanipha mhlawumbe. Izikhathi eziningi umane uklama ikhishi lakho lamaphupho, futhi ngokuya ngenani kanye nesabelomali sakho sangempela, uqala ukulungisa izinto ezizokwenza
ilungele isabelomali sakho. Umbuzo ukuthi ungayenza kanjani ilungele isabelomali sakho. Awufuni ukwehla ezintweni ezibaluleke kakhulu kuwe. Mayelana nezinto zokwakha kanye nokuqedwa kwekhishi lakho, kungahlukahluka okukhulu ngokuya ngamanani. Uma ubheka umehluko phakathi kwezinye izindlela ngokwazo, kwesinye isikhathi azibonwa. Ngale ndlela ungonga ngezindleko ngobuhlakani. Ngakolunye uhlangothi akufanele uyekethise kwikhwalithi yemishini yakho yasekhishini ebalulekile. Ngemuva kwalokho okushibhile kungahle kubonakale kubiza ekugcineni. Lokho kufanele futhi kungavinjelwa ngaso sonke isikhathi. Kumele nje uthole umphakeli ongakunikeza inani elifanele ngemali. WOWOW lowo umphakeli!
Umsebenzi wokugcwalisa ngebhodwe we-chrome
Impompo yokugcwalisa imbiza ngokuqinisekile isebenza ekhishini lakho elingenza impilo yakho yasekhishini ibe lula kakhulu. Njengoba bengekho abantu abaningi abanalolu hlobo lwezinto zasekhishini, ukusetshenziswa akulona okwangoku. Kodwa-ke, kunikeza usizo olukhulu ekhishini lakho futhi kukugwema ukuthwala izinto ezisindayo njengamabhodwe agcwele amanzi. Ngompompi we-chrome wokugcwalisa imbiza ye-WOWOW ungagcwalisa amabhodwe akho ngamanzi ngenkathi asesesitofu. Ngale ndlela akudingeki uphathe lezi zimbiza kusuka ekhishini usinki ukuya esitofini ukubilisa amanzi. Ikakhulu uma unezandla noma izingalo ezibuthakathaka, noma umane ungenamandla, le mpompo yokugcwalisa imbiza ye-chrome ingenza impilo yakho ibe lula kakhulu.
Ngompompi we-chrome wokugcwalisa imbiza ungagcwalisa amabhodwe amanzi ngenkathi kusesitofu ekhishini. Akunandaba noma umlilo usuvaliwe, noma uma kunamanye amapani ezimbiza abilayo nawokupheka. Njengoba kampompi yokugcwalisa imbiza ye-chrome yayenziwe ngezinsimbi ezisezingeni eliphakeme?, Yayingamelana kalula nokushisa. Ngakho-ke le tap yokugcwaliswa kwembiza ye-chrome isebenza kakhulu futhi ukwengeza okuhle ekhishini lakho.
Inani lenani lokugcwalisa ibhodwe le-chrome
Njengoba kushiwo ngenhla, i-WOWOW ikunikeza inani elifanele ngemali ongayithola emakethe. Le tap yokugcwalisa imbiza emangalisayo ye-chrome nakanjani ingancintisana nanoma iyiphi i-A-brand njengoba inikela ngekhwalithi efanayo noma ingcono, kodwa nokho inikezwa ngentengo engabizi. Amanani ompompi wokugcwalisa ibhodwe we-chrome chrb angaphindwa kathathu noma abize kakhulu. I-Wowow ikhombisa kaninginingi ukuthi lolu hlobo lwamanani aludingeki nhlobo. Ngakho-ke i-WOWOW ikunikeza inani elihle kakhulu lemali ngale tap yokugcwaliswa kwembiza ye-chrome. Akungabazeki nakancane!
Ikhwalithi yompompi wokugcwalisa ibhodwe le-chOW ye-CHWOW ayithinteki. Hhayi endaweni yokugcina ngoba i-WOWOW isebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ezifana nensimbi engagqwali kanye nokuqedwa kwekhwalithi ephezulu ye-chrome. Uqaphela ikhwalithi ngokushesha. Ngesisindo esingekho ngaphansi kwama-60 oz uzizwa sengathi senziwe ngensimbi eziqinile. Le mpompo yokugcwalisa imbiza ye-chrome ihlala iminyaka eminingi, futhi ungazuza futhi ngokusebenza okungahambi kahle kwaleompompo wokugcwalisa imbiza ye-chrome. Impompi yokugcwalisa imbiza ye-chrome ifakwe ne-aerator yeNeoperl. Lokhu kunikeza ingcindezi eqhubekayo, nokugeleza kwamanzi njalo. I-aerator iqinisekisa ukusatshalaliswa okuncane, kanye nesipiliyoni sokudonsa amanzi ngaphandle kokuvuza.
Finyelela empompini wokugcwalisa ebhodweni le-chrome
Le kampompi yokugcwaliswa kwembiza ye-chrome yenzelwe ngokuhlakanipha ukuthi ingathathi noma yisiphi isikhala esidingekayo ekhishini lakho. Ngokugoqa le tap yokugcwaliswa ebhodweni le-chrome elula, ungayigcina kalula odongeni olungemva kwesitofu. Impompo yokugcwalisa imbiza ye-chrome inengalo eguqukayo eyimbili. Ngale ndlela ingagcinwa minimalistically, futhi nokho ifinyelela isikhathi eside lapho welulwa ngokuphelele. Ngobubanzi bawo obungamasentimitha angama-24 ukusuka odongeni, ungafinyelela kuwo wonke amakhona esitofu sekhishini lakho.
Ngezimbambo ezimbili ungasebenza kahle uthepha lwe-chrome lokugcwalisa imbiza kalula ngaphandle kokuvuza. Lokhu kunikeza nokuphepha okwengeziwe, njengoba abanye abantu besaba lolu hlobo lwamompompi. Njengoba kungekho sinki, amanzi achithekile angavele avuze esitofini. Ungavala le mpompo yokufaka ebhodweni le-chrome nge-master valve, eduze kodonga. Futhi ungayivala kanye ne-valve at spout. Iqinisekisa ukusakaza okungaguquki okufeza injongo yakho impela. Lokhu kuvikela okuphindwe kabili kunikeza ukuphepha okuphezulu. Uma ufuna ukusebenzisa itomu lokugcwalisa ibhodwe le-chrome, uvele uvule i-master valve, futhi usebenzisa le tepi yokugcwalisa imbiza le-chrome njenganoma iyiphi enye kampompi yasekhishini.
Impompo yokugcwalisa ebhodweni le-chrome
Ngenxa yokuqedwa kwe-chrome ebukekayo, le tap yokugcwalisa ebhodweni le-chrome ingeza kakhulu kwisitayela sekhishi lakho. Lokhu kufaka ukugoqa okubonakalisa okuphezulu nokucwebezelayo kumpompi wakho wokugcwalisa imbiza. Ngokuhambisana nomzimba wensimbi ongenasici we-304, le mpompo yokugcwalisa imbiza ye-chrome inikeza umthelela omkhulu kwisitayela sakho sasekhishini. Ngaphandle kwalokho, le tap yokugcwalisa imbiza ye-chrome ayisi-corrosion futhi ihlala inhle futhi inhle iminyaka. Akusizi ngalutho i-WOWOW ikunikeza isikhathi seminyaka eyi-5 kuleompompo wokugcwalisa imbiza ye-chrome. Lokhu kufakazela ukuthi i-WOWOW iyazethemba ngomkhiqizo wayo, kanye nenani lemali oyitholayo. Izinzuzo zompompo wokugcwalisa imbiza ye-chrome ngamafuphi:
• Ithiphu yokugcwalisa imbiza okusebenzayo
• Idizayini yanamuhla enekhwalithi ephezulu ye-chrome
• Insimbi engagqwali
• Amavalvu amabili
• Ukufinyelela okuphezulu ngezingalo eziguqukayo ezimbili
I-SKU: 2311200C Categories: Ikhishi Faucets, Embizeni Filler Ikhishi ompompi Tags: Qeda i-Chrome, Ikhishi Sink Faucet, Wall Mount
15.5 x 9.7 x amasentimitha angu-2.1